Noma yimuphi umuntu wesimame efuna ukwenza izipikili yabo enhle uzilungise kahle. Monochrome izipikili - lesikahle ifaneleka futhi emibuthanweni yokuzijabulisa futhi ekuphileni kwansuku zonke.
Ubuhle yowesifazane enezici, futhi ubuso ngamunye inamathrendi yayo yemfashini. Solid umbala manicure bekulokhu futhi siyohlala mkhuba, njengoba le ndlela kuyafaneleka kunoma isiphi isimo. Imibala egqamile futhi nangezindlela ezihlukahlukene yokudala, ezolile futhi ethambile, ukushintshashintsha namanzi futhi sesivuthiwe futhi shades ezijulile - konke lokhu sisabenza nganoma yisiphi isikhathi.
Inkathi ngayinye yonyaka kuhambisana izincomo ezivela abaklami zokudala owabeka mkhuba ekuklanyweni izipikili. Le sizini, lo manicure French namanje phezulu, kodwa uba imvelo ezolile ngaphezulu. Matte izimpiko, ukukhanya kanye ingubo avulekile ingcoliswe ithiphu eyodwa kuphela - lokhu akukona uphawu incompleteness lokhu mkhuba omusha e nail design.
Ukuze udale isithombe ephelele, awukwazi ukwenza ngaphandle izandla amahle futhi uzilungise. Ngisho manicure yokudala, ezenziwa umklami professional, ngeke bakwazi ukufihla izici izinzipho uzilungise. Yingakho kwasekuqaleni kufanele alethwe ezandleni oda. Kulula ukwenza ekhaya, kodwa ungafaka isicelo ehhovisi professional yenkosi, ngenhlanhla, zingase zinikeze ezinombala ofanayo manicure izinzipho enhle.
zokugeza abahlukahlukene nobuhle izimali zizosiza abesifazane ukuxubha ngokubukeka uzilungise. Modern ubuhle salon ukunikela omningi amasevisi nail, ngakho kufanele kuphakama izinkinga nale. Kwaba ngemva izandla ukuze, kungenzeka ukucabanga mayelana nomklamo izinzipho.
Screaming ukuthula zokudala futhi ephelele kwengqondo?
Monochrome izipikili - lo zabuna ezingafi. imibala ahlotshiswe ngesinye bangacikeka. Ngaphezu kwalokho, lokusungula akuyona njalo ezifanele. Yingakho ezimweni lapho ingqondo akanayo imicabango mayelana nomklamo, okuthandayo kumele anikwe impendulo eyodwa vo - kuba izinzipho plain. imibono umklami sika, kanye izinto ngokombono womuntu siqu kungaholela kudalwa eliyingqayizivele futhi okuphumuzayo ngesikhathi esifanayo isithombe.
Timeless - manicure obucayi isitayela romantic. Soft iyashintsha iyaphupha ibe shades, ukukhanya, decor kancane obonakalayo - konke kuyafaneleka kunoma isiphi isimo. Lo mklamo kufanelekile njalo owesifazane, futhi ikunika izandla uzilungise ukubukeka.
Izinzuzo nezingozi nebubi kukhona manicure okuqinile
Yiqiniso, ezolile futhi olinganiselayo design nezinzipho uthanda cishe wonke umuntu. Solid umbala nail sula ne Ukugcizelelwa omunye nail - lena ukhetho kangcono nalabo abafuna ame phandle kudonse lonke labo cishe izibambo manicured. Noma kunjalo, abanye izintokazi njalo ukulwela ukuveza ubuntu babo ngokusebenzisa design elikhanyayo futhi zokudala.
izinzipho Solid kunezimo eziningi:
Okokuqala, zihlale efanele.
Okwesibili, zisebenza kuzo zonke izimo futhi ngezinye izenzakalo yomphakathi, nightclub, kanye nosuku, futhi ehhovisi).
Okwesithathu, izinzipho ethafeni angadingi isikhathi esiningi ukubanakekela - ukwenza manicure ezifana ekhaya silula.
Calm nangokulinganisela design nezinzipho ukuze isithombe kwansuku zonke. Kulabo namanje ngeke akwenze ngaphandle into egqamile futhi engavamile, kukhona isixazululo esiphelele - njengabantu stylish ku nail olulodwa.
Monochrome izinzipho: imibono manicure ezithile zonyaka
Wonke umuntu wesifazane esifisa ukwakha idizayini enhle ka marigolds yabo. Yiqiniso, ukuma, ubude umbala Palette akuvumele ukutshela okuningi ngobuntu abanikazi yezandla uzilungise futhi manicure engavamile. Kufanele kuqashelwe ukuthi izinguquko kwesizini imvelo ahlobana ngokuqondile ku-idizayini izinzipho.
Umuntu kumelwe amane uzibheke: izinzipho ebusika abesifazane zipendwe ngemibala cool nge predominance ka Decor ebusika, ehlobo futhi abe ithoni namanzi futhi ovuthiwe, lapho kuqala ekwindla zonke izintokazi zama "ingubo" izinselo zazo kancane ukufudumala, futhi zizenza umbala Iphalethi efudumele.
Ijamo, ubude kanye nomklamo
izinzipho ezinde semikhawulweni ezicijile - esifuze yesikhathi esidlule. Le sizini, zonke izintokazi uncamela marigolds kancane esifushane ifomu kucocekile. Bored? Awa, akusinjalo. Gqamisa ubuntu, ukunaka bonke abanye bezosiza imibono abaqinile manicure ku izipikili short.
jacket ezingafi. Kanye zakudala manicure isiFulentshi, nail design imfashini inyanga iyaduma ngaphezulu, njengoba nguye kudala ukukhanya engavamile ngezandla zesifazane.
Feng Shui. Monochrome izipikili futhi sizogxila kunangonyaka indandatho umunwe - umklamo sebuhlaziyiwe isigamu fair abantu isizini lokugcina, futhi manje nokumthanda asikapheli eyodwa iota.
Matte. sheen Iridescent okwesikhathi sahamba kude - esikhundleni sakhe kwavela matte shades ezigcizelela ubuntu kanye nokuzinikela ubuhle.
izinzipho uzilungise iDemo elinefomu wekugcina, zibe nombala ofanayo - kungcono a Classic. Engingakusho nje wenze manicure professional kanye ufake izingqimba ambalwa fresh lacquer yanoma yimuphi umbala. Kuyoba ngokwanele ukuba ukuzenza bahle.
nail design - akusiwona into ebaluleke kakhulu. Ubukhulu nokuma ubude ipuleti nail - yilokho kufanele uyinake kakhulu. izinzipho ezinde kakhulu ngesikhathi emfashinini - ke kuyiqiniso obungenakuphikwa okuyinto udinga nje ukwamukela. Nokho, ozinikezele ungalilahli ithemba - zikhona izindlela eziningi ukuze uhlukanise ngepeni yabo esixukwini futhi udale i mklamo ongavamile.
Le sizini, ngobufushane ethandwa. umumo ezolile obuphelele encane lihambisana enamathela okuyisidina - yilokhu bayokwazisa ezizungezile. imiklamo ahlotshiswe kufanele kwesokunxele kulabo yilezozintombi abangenalutho ukwenzani zizwakale kahle futhi umuzwa isitayela.
Amafomu ezivame kakhulu izinzipho:
Almond ukuma yezipikili eside.
umumo Square imiphetho oyindilinga.
Izipikili, stilettos, okuyinto nibaluleke ngokuphelele ukhohlwe.
Nobuhle nezinzipho isandla zesifazane kuboniswa hhayi ukuklanywa khona izakhi zokuhlobisa. Into yokuqala okumele uyenze izandla manicured, futhi kuphela bese unikela abafundi the look wokuqala.
izinzipho Beautiful ngezandla zakhe
Nikeza izandla uzilungise ukubukeka ngaphansi amandla owesifazane ngamunye noma intombazane. Isinyathelo sokuqala siwukuba ukulungiselela okugeza: ngamanzi afudumele, engeza inani elincane uLwandle Lukasawoti (ukuqinisa izinzipho) kanye amaconsi ambalwa amafutha abalulekile (ukuthambisa cuticle). Ngemva kwalokho, kutuswa ukuba ome ngezandla ngokususa lokusula kubo ithawula futhi zisebenza esincane amafutha noma ukhilimu izakhi.
Khona-ke, usebenzisa ithuluzi asizayo akhethekile izimonyo udinga ukususa cuticles, khona-ke kungenzeka ukubeka ungqimba lacquer ecacile. Uma isizinda esomile, ungenza omunye umbala manicure. umbala Izinketho Iphalethi kungaba zahlukahlukene kakhulu, ezisukela opholile iyashintsha iyaphupha ibe shades ziphethe yamalahle omnyama noma garish ophuzi. Konke kuncike esimweni esithile kanye nemizwelo. Ukuze wenze umklamo nail ezithakazelisayo futhi original ngokwanele ukuhlobisa omunye nail usebenzisa bezinto, imihlobiso, izimbali, izimpawu, sequins, rhinestones nabanye.
Calm hhayi uvalo
Solid umbala manicure akukwazi isidina. Lesi sitatimende lungekho ukufaka isikhalazo. Calm beige noma elimhlophe olinganiselayo, cherry ezivuthiwe noma iphiko likhale sika - Classic uhlale yakudala, futhi lokhu, esikhundleni salokho, kusho ukuthi umbala esiqinile fashion manicure ngeke isebenze kuze kube phakade. Ukuhlukahlukana samanje umbala Palette onganelisa izidingo ikhona, ngisho ozinikezele eyinkimbinkimbi kakhulu futhi uphambene,.
Monophonic nail design akudingi isikhathi esiningi ukulidala. Yenza manicure elula ekhaya, futhi ezihlukahlukene enkulu imibala, shades kanye indlela yokwenza ikuvumela ukuba ushintshe ukuklanywa izimpiko okungenani nsuku zonke.
Solid umbala nail sula luluhle izinzipho anoma yibuphi ubude shape. umbala ewubuciko ebomvu noma emnyama ukugcizelela zonke izinzuzo izimpiko ikati, njengoba lezi shades bheka nice izinzipho iDemo.
amaphethini esiyinkimbinkimbi esenza, imibala egqamile kanye amaphetheni, imigqa weJiyomethri nokunye okuningi - zonke lezi imihlobiso akuzona ukubukeka efanayo amahle izinzipho anobude obungalingani nomumo. Ngokwesibonelo, ngisho iphethini kakhulu elula weJiyomethri umane banyakamisa izinzipho zakho short futhi ayibanzi. A igolide ifaka ngokuchichima ngokuhlanganyela ayinhlama futhi Iyaphela lidlulisele izinzipho ezinde umphumela inhlamba.
Kuphela esiphethweni esisodwa - akumelwe sikhohlwe mayelana charm engokwemvelo. Monochrome izinzipho bheka umxhwele futhi ngokunembile, kungakhathaliseki obuphelele zabo ngaso sonke isikhathi.
Uwoyela Castor yezipikili: izici zohlelo lokusebenza, izindlela kanye nekghono
Incazelo Lesitshalo nezilinganiso gel ukuvenisha nge "Aliekspress". IsiShayina gel ukuvenisha nge "Aliekspress": Izibuyekezo
Gel sula PNB: ukubuyekezwa, Iphalethi, ukusetshenziswa
Funda indlela ukwenza kusebenze amaphuzu ku-megaphone
Ingane kugwinywe uhlamvu. Yini okumelwe uyenze? Kungakhathaliseki ukuthi kuyingozi?